Global Voices teny Malagasy » Profesora Shinoa Naato Tamin’ny Fampianarana Lalampanorenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Profesora Shinoa Naato Tamin'ny Fampianarana Lalampanorenana
Voadika ny 05 Septambra 2013 4:55 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Lalàna, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Misy mpampianatra lalàna iray naato tao Shina noho ny fomba fampianarany sy ny fandrafetany lahatsoratra momba ny lalampanorenana.
Tamin'ny Jona 2013 ny profesora Zhang Xuezhong avy ao amin'ny Oniversiten'ny Politika sy ny Lalàna Shina Atsinanana ao Shanghai no namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ny fiandohana sy ny loza mety ateraky ny fanentanana 2013 manitsakitsaka ny Lalampanorenana” (《2013反宪政逆流的根源及危险》). Tamin'ny 17 Aogositra, nahazo filazana avy amin'ny oniversite i Zhang fa nosintonina ny fahazoany mampianatra an-tsekoly. Ny komitin'ny antoko komonista ao amin'ny oniversite no nanao ny fanapaha-kevitra, araka ny China Change , tranonkala mpandala ny zon'olombelona.
“Nataon'ny oniversite mazava tamiko fa manitsakitsaka ny Lalampanorenan'ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Shina ny lahatsoratra, sady mandika ihany koa fitsipi-pitondratenan'ny mpampianatra,” Hoy ny fanazavan'i Zhang tamin'ny alalan'ny fanambarana nataony tao amin'ny kaonty WeChat.
Ny Profesora Zhong Xuezhong. Sarin'ny Sina Weibo 
Nisedra sivana mavaivay ny gazety Shinoa Southern Weekend  tamin'ny fiandohan'ity taona ity rehefa niantso ny hampanjakana ny lalampanorenana ao Shina.
Liberaly malaza ao Shina i Zhang Xuezhong. Naato vonjimaika izy tamin'ny Septambra 2012 noho ny fanoherany ny fanatanterahana ny taranjan'ny “fanabeazam-pirenena”  any amin'ny sekolin'i Hong Kong. Tamin'ny Mey 2013, raha namoaka torolalana amin'ny rafi-panabeazana handrara  [mg] ny fampianarana ny lohahevitra manahirana fito ny Antoko Komonista Shinoa, dia iray amin'ireo profesora fito namoaka voalohany ny resaka tao amin'ny sehatra famahanam-bolongana bitika shinoa malaza i Zhang. Ny politikan'ny “Tsy Filaza Fito” dia mandrara ny fiadian-kevitra amin'ny resaka “ny soatoavina manerantany, fiarahamonim-pirenena, zon'olompirenena, fahaleovantenan'ny fitsarana, fahalalahan'ny fanaovan-gazety, ny fahadisoana vitan'ny antoko komonista taloha ary ny saranga kapitalista iangarana manokana” any amin'ny oniversite. Nofafana nanomboka hatreo ny kaonty Weibo an'i Zhang.
Tamin'ny Marsa 2013 i Zhang namoaka boky mitondra ny lohateny hoe  [zh] “Ny Hevitry ny Maro Vaovao—Ny Natiora sy ny Fiantraikan'ny Fitondran'Antoko Tokana.”
Maro amin'ny mpisera Weibo no naneho ny fanohanany an'i Zhang tamin'ny fomba fampianarany ny Lalampanorenana, ka tsy ela dia maro ny fanehoa-kevitra voafafa.
Nanoratra  [zh] ny mpisolovava Zhang Quan :
Ilaina ny mametraka lalampanorenana hamerana ny fahefan'ny governemanta, izay mitarika ny fandrosoan'ny fiarahamonin'olombelona. Eny ifotony io dia miresaka ny zon'olombelona fa tsy zon'antoko. Rehefa tsy voafetra ny fahefana dia hisy hatrany ny olana na ho ela na ho haingana. Saingy azo iadian-kevitra ny lalana sy ny fomba hametrahana ny lalampanorenana.
Nitsikera  [zh] ny mpisera “Lixing Zheren” :
Ny fandavan'ny oniversite ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalaha-tsaina akademika dia midika fa mitsipaka sivilizasiona ny firenena iray. Afa-miteny mivantana aho raha jerena ny manjò ny profesora Zhang Xuezhong fa nampiseho ny hakanosàny ny manampahaizana Shinoa satria ao amin'ny sekoly ahitana mpampianatra sy mpianatra an'arivony dia iray monja ny olona mitolona tahaka an'i Galileo fony tamin'ny vanim-potoana Antenantenany! Tsy izany ve ny voinan'ny firenena sy ny vanim-potoana?
Nampiàko  [zh] ihany koa izany fahatsapana izany ny mpisera “Wang Dongcheng”:
Ho an'ny mpampianatra oniversite, ny fitsipi-pitondratena [etika] dia ny “Fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalaham-panahy”. Ny teny sy ny asan'i Zhang Xuezhong no naneho fa nanaraka ny etika izy. Amin'ny fotoana tsy dia maro ny mpampianatra oniversite mampiseho ny tena heviny dia manana ny lanjany manokana i Zhang Xuezhong.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/09/05/51260/
 China Change: http://chinachange.org/2013/08/26/law-professor-suspended-from-teaching-for-pro-constitutionalism-expressions/
 Sina Weibo: http://www.weibo.com/2539588250/A6qxOBKvG
 Southern Weekend: https://globalvoicesonline.org/2013/01/08/support-southern-weekend-against-censorship-in-china/
 taranjan'ny “fanabeazam-pirenena”: https://globalvoicesonline.org/2012/09/03/hong-kong-national-education-program-prompts-hunger-strike-sit-in/
 mitondra ny lohateny hoe: http://75.119.209.87/xinchangshi.pdf